Kaadhka Debit -ka ee Famzoo Lacag La -Siiyey U Qalmay | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Dib u eegid
Bogga ugu weyn Kaadhka Debit -ka Hore ee Famzoo U Qalmay? Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | 2021 Dib u eegid.
Kaarka Debit Famzoo ee Lacag -bixinta Hore waxaa loogu talagalay qoysaska jeclaan lahaa in carruurtoodu qaataan arrimaha lacagta oo ay hore u soo saaraan caadooyin lacag oo wanaagsan.
Malaayiin qof ayaa deymo ku gala sababtoo ah ma haystaan ​​maareyn lacageed mana si habboon u soo saaraan miisaaniyad ay ku hagaajiyaan kharashaadkooda. Haddii ay jirto waqti ku habboon qofna waa in laga fekero sida loo maareeyo lacagta, nolosha dhallinyaradu waxay noqon doontaa mid qumman. Tani waa sababta oo ah carruurta ku jirta tirakoobkaas ayaa si fudud loogu cadaadiyaa inay wax iibsadaan.
Si kastaba ha ahaatee, kaarka Debit Famzoo Prepaid waxaad ka dhigi kartaa maaliyaddaada wax qoys.
Sidaa darteed, maqaalkan, Waxaan ku samayn doonnaa dib -u -eegis dhammaystiran Kaadhka Lacag -bixinta Famzoo. Waxaan eegi doonaa sida ay u shaqeyso, iyo sida aad ugu qalmi karto kaarka.
Waa maxay Kaadhka Debit -ka ee Famzoo Lacag La Bixiyay?
Famzoo waa badeecad maaliyadeed oo la taaban karo ama bangiga qoyska oo loogu talagalay in waalidku kormeero oo maamulo.
Astaamaha lagu garto kaararka deynta hore ee Famzoo ee kaararka kale ee horay loo sii diyaariyey ee suuqa kaarka deynta ee horay loo sii bixiyay ayaa ah inay soo bandhigto hab lagu dejiyo oo lacag loogu weeciyo akoonnada kala duwan qaybaha sida kharashaadka, kaydinta, maalgelinta, iyo bixinta.
Halkan fiiri waxyaabaha muhiimka ah ee laga ogaado kaarka FamZoo -ka ah
Majiro khidmadaha deynta
Kaadh lacag la'aan ah iyo ikhtiyaarrada ATM
Waalid ahaan adiga oo isticmaalaya Famzoo, adiga ayaa leh xakamaynta sida kaarka loo isticmaalo. Sidoo kale, waxaad samayn kartaa akoonno si aad u daryeesho gunnada billaha ah ee carruurtaada. Intaa waxaa sii dheer, Famzoo Kaararka debit -ka Lacag -bixinta waxaa laga dalban karaa onleenka iyada oo aan la hubin deynta.
Waxaa jira siyaabo badan oo loo adeegsado Famzoo iyo in lacag loogu shubo kaarka Famzoo. Waxaad ku shuban kartaa adiga oo adeegsanaya koonto jeeg. Ogow farqiga u dhexeeya xisaabaadka jeegga iyo kaydka.
Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale lacag ugu dari kartaa kaarka si otomaatig ah adoo adeegsanaya deebaaji toos ah.
Weli waxaa jira xulashooyin kale sida:
FamZoo waxay bixisaa Reload @ ikhtiyaarka Diiwaangelinta oo kuu oggolaanaya inaad lacag ku darto goobaha tafaariiqda sida Walmart, Rite Aid, 7-Eleven, Walgreens, iyo inbadan.
Lacag caddaan ah ayaa la keeni karaa goobaha tafaariiqda ee MoneyPak waxaana lagu ridi karaa kaarka.
Waxaad ku shuban kartaa kaarka adoo adeegsanaya wareejinta PayPal.
Waxaad sidoo kale lacag ku dari kartaa Wells Fargo SurePay.
Si aad u bilowdo waxaad u baahan tahay inaad marka hore hesho abka. Markaa haddii aad tahay isticmaale Android ah, waxaad ka heli kartaa barnaamijka dukaanka Google play, iyo haddii aad tahay isticmaale IOS, barnaamijka ayaa laga heli karaa dukaanka App -ka.
Kaadhka Hore ee FamZoo wuxuu abaalmariyaa dadka haysta koontada ee horay u bixiya. Waxaa jira dhawr ikhtiyaar oo la kala dooran karo marka la samaynayo kaarka lacag bixinta bil kasta. Waa tan fiirinta sida qiimaha bil walba u burburayo:
$ 5.99 qoyskiiba markaad bixinayso bil kasta
$ 4.33 qoyskiiba marka aad hore u bixiso $ 25.99 muddo lix bilood ah
$ 3.33 qoyskiiba marka aad hore u bixiso $ 39.99 12 bilood
$ 2.50 qoyskiiba marka aad hore u bixiso $ 59.99 24 bilood
Qoyska dalbanaya afar kaar ayaa suurtogal ah inay ku bixiyaan wax ka yar 63 senti khidmada bil kasta halkii kaar. Carruurta ka yar 12 sano ma lahaan karaan kaar magacooda lagu bixiyay. Si kastaba ha ahaatee, waalidku wuxuu dalban karaa kaar gooni ah oo loo adeegsan karo dabagalka iibsiyada ama deeqaha loo sameeyay magaca ilmaha. Dhallinta da'doodu u dhaxayso 13 ilaa 17 waxay u baahan doonaan inay maraan habka xaqiijinta onlaynka ka hor inta aan la siin kaararkooda.
Haddii aad waligaa la yaabtay sida kaararka deynta ay lacag ku helaan, akhri Sidee Shirkadaha Kaarka Amaahdu Lacag U Sameeyaan | 2021 Qaab Ganacsi Buuxa
Xadka Kaarka Amaahda ee Famzoo Lacag -bixinta Hore
Xadka Kharashka Maalinlaha ah: $ 5,000
Xadka Kaarka: $ 5,000
Xadka ATM -ka Maalinlaha ah: $ 510
Lacagta Lacagta Maalinlaha ah: $ 2,500
Khidmadaha kaarka deynta ee Famzoo Lacag -bixinta
KHARASHKA WAXQABADKA: $ 0.00
KHARASHKA BISHA: $ 2.50
KHARASHKA ATM (XIRIIRKA): $ 0.00
KHARASHKA ATM (KA BAX SHABKA): $ 0.00
KHARASHKA BIXINTA SAXIIXA: $ 0.00
KHARASHKA BIXINTA PIN: $ 0.00
KHARASHKA DIRISTA tooska ah: $ 0.00
KHARASHKA KHASAARAHA CASHKA: $ 0.00
Kaadhka Lacagta Hore ee Famzoo Ma U Qalmaa?
Si kooban u sheeg, waa u qalantaa dhammaantood. Markaad fiiriso astaamaha ay bixiso iyo khidmadaha bil kasta ee hooseeya, Aad bay u fududahay in la arko in kaarka uu mudan yahay in la isku dayo.
Sideen U Diiwaangeliyaa Qoyskayga?
Waxaad si fudud iskaga diiwaangelin kartaa adigoo booqanaya degelkooda ama waxaad iska diiwaan gelin kartaa mid ka mid ah shuraakadooda. Si kastaba ha noqotee, Haddii aad iska diiwaangelinayso hay'ad maaliyadeed, waa inaad iska diiwaangelisaa isku xirka diiwaangelinta ee ku yaal boggooda bixinta Famzoo.
Tani waxay Famzoo ka dhigi doontaa inay ku siiso dhammaan xuquuqdaada iyo dheefahaaga.
Mudo intee leeg ayay qaadan doontaa qaadashada kaadhka
Waxay Famzoo qaadataa qiyaastii toddoba ilaa toban maalmood si ay kuu hesho kaarkaaga. Kaararka waxaa loo diraa cinwaanka aad u isticmaasho xaqiijinta aqoonsiga qofka kaarka leh. Markaad buuxinayso macluumaadkaaga hubi inaadan wax khalad ah ku samayn.
Sideen u cusboonaysiiyaa Macluumaadka Biilkayga ama Beddela Qorshayaasha Lacag -bixinta?
Haddii aad rabto inaad beddesho macluumaad kasta oo ku saabsan kaarka deynta, ama Xisaabta Papal-ka ee loo adeegsado rukhsayntaada billaha ah, ama laga yaabee inaad rabto inaad ka beddesho qorshe lacag-bixin bille ah oo aad u noqoto qorshe lacag-bixin hore ah. Raac Talaabooyinkan:
Tallaabada 1: U gal FamZoo waalid ahaan.
2: Haddii aad ku jirto aalad moobayl, u beddel Desktop UI adoo raacaya tilmaamaha halkan.
3: Dhagsii Store tab.
4: Click on the Beddel Macluumaadka Biilka isku xira dhinaca bidix
5: Raac tilmaamaha ku qoran foomka daaqadda si aad u samayso isbeddellada la rabo.
Ma u iibsan karaa Famzoo Qoys kale?
Haa, waxaad u heli kartaa kaarka Famzoo kaarka hore loo sii dhiibay qoys kale ama xitaa ka caawi iyaga inay cusboonaysiiyaan khidmadahooda billaha ah. Tan waxaa lagu sameeyaa a rukunka hadiyadda. Markaad dalbato rukhsad hadiyad qoys kale, waxay helayaan waxaa lagu xisaabin doonaa waxaad u iibsatay. Si kastaba ha ahaatee, waxay heli karaan oo kaliya diiwaangelinta kadib.
Kaarka deynta ee Famzoo Prepaid wuxuu sidoo kale ku siinayaa fursad aad ku sameysid amar badan. Waxaad ku dalban kartaa saaxiibbadaada, macaamiishaada, iyo saaxiibbadaada qiimo jaban oo leh Kaarka deynta Lacagta Hore ee Famzoo.
Intaa waxaa sii dheer, waxay xitaa siiyaan nuqul summad leh oo ah barnaamijka FamZoo (goobta) shirkaddaada ama ururkaaga. Kuwaan, guji badhanka hoose si aad ula xiriirto Famzoo.
maxkamad Free. 30 -ka maalmood ee ugu horreeya waa lacag la'aan. Haddii aad tirtirto diiwaangelintaada, hubso inay tahay ugu yaraan 24 saacadood ka hor intaan maxkamaddu dhammaan.
Ikhtiyaarrada xamuulka lacagta caddaanka ah ee xaddidan. Lacagta kaarkaaga kuma shuban kartid ATM. GreenDot iyo Mastercard rePower ayaa ah ikhtiyaarkaaga dib-u-soo-celinta lacag caddaan ah, iyo labadaba kharash.
Koontada keydintu keligeed ma bixiso dulsaar, laakiin waxaad dooran kartaa inaad bixiso dulsaarka isku -darka toddobaadle, bille ama sannadle. Kaararka dheeraadka ah. Haddii aad hesho shan kaar ama ka badan waxaad bixin doontaa khidmadda maraakiibta $ 2 mar keliya kaar kasta oo dheeraad ah.
Keydso, kharash garee oo bixi. Xisaabaadka carruurta ayaa loo qaybiyaa saddex xisaab -hoosaad oo loogu talagalay kaydinta, kharash -bixinta iyo bixinta.
Faahfaahinta macaamilka oo la diiday. Marka kaarka la diido waxaad heli doontaa xog gaar ah oo ku saabsan sababta loo diidey iyo tallaabooyinka aad qaadi karto si aad wax uga qabato.
Dulsaarka waalidku bixiyo. Koontada keydintu keligeed ma bixiso dulsaar, laakiin waxaad dooran kartaa inaad bixiso dulsaarka isku -darka toddobaadle, bille ama sannadle.
Haddii aad raadinayso hab sahlan oo aad u habayn karto dhaqaalaha qoyskaaga oo aad ula socon lahayd sida aad dhammaantiin u bixisaan lacagtaada bil walba ama saddexdii biloodba mar, Famzoo waa adiga.
Famzoo waxay kuu oggolaaneysaa inaad xaddiddo waxa aad rabto inaad ku bixiso bil kasta ama mid ka mid ah carruurtaada. Xaqiiqda ah inay adiga, waalidka, ku siiso kontarool kaarka kale ayaa ka dhigaya wax kasta oo laga cabsado. Waxay kaa badbaadineysaa mashaakilka isku dayga inaad la socoto kharashyada carruurtaada waxayna kaa caawineysaa inaad barato mas'uuliyadda maaliyadeed.
Talo soo jeedins:
Sida Loo Kordhiyo Xadkaaga Dhibcaha Chase ee 2021 | La cusboonaysiiyay
Hubi ansixinta inay khaldantay; Samee intaad jeegga ansaxinayso.
Maqaalkani wuxuu sharxayaa meelaha ugu fiican ee laga dalbado jeegagga onlaynka 2021. Jeegaggu waa dhaqaale aad u muhiim ah…
Meesha aad tagayso si aad u xalliso mid ka mid ah baahiyahaaga lacageed waa inay noqotaa bangigaaga. Iyadoo aan loo eegin adeegyada…